ပြည်သူ့အားဆေး နှစ်တောင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » ပြည်သူ့အားဆေး နှစ်တောင့်
Posted by ကြယ်လေး on Nov 15, 2010 in Aung San/Aung San Suu Kyi, Relationships & Family, Society & Lifestyle | 17 comments
အ မှန် ဆုးံ ပဲ ပေါ. ဗျာ … နောက် နောင် သူ တို. ကို အ တု ယူ ရ မှာ ..
ဟိုက်…….။အန်ကယ် လည်းပါတယ်ကိုး………..။ကောင်းလိုက်တာ….။လမ်းဆုံဆိုတာ ဒါပဲပေါ့။မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အလင်းရောင်ပေးမဲ့ ကြယ်နှစ်ပွင့်တော့ အရောင်တွေ လင်းလာပြီ။အန်ကယ်ဇာကြီး တယောက် မြန်မြန်လင်းနိုင်ပါစေဗျာ…..။
CHEAP AMAY BBE TOP
a yan ko wan tar dal….
2 york sa lone ko lay sar dal…
a yan ko wan tar dar pal
Amay Yay & U Kyaw yay ,, Nout ka chee htote couple ko way way shaung naw. . .achaung tha marr tway, sate la si tway..!
seinrlu ပြောတာဘယ်သူတွေတုန်းဗျ !! @_@
ဟုတ်လိုက်တာ။ မှန်လိုက်တာ။ တစ်ကယ့်အားဆေးတွေပါပဲနော်။
အားဆေး ကြီး နှစ်တောင့် အများအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ အလုပ်တွေ များစွာ လုပ်နိုင်ပါစေ။
သူများအတွက်လည်း လုပ်နိုင်သလို ကိုယ်တိုင်မှာလည်း ကျန်းမာ အသက်ရှည်ပြီး စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ ရှိနိုင်ကြပါစေ။
ကြားမိတာ ၀င်ပါလိုက်အုန်းမယ်နော်.. သူတို့ နှစ်ယောက် တယောက်က ၀ိဇ္ဇာလိုင်း.. တယောက်က ၀ိပသနာလိုင်း.. လိုင်းတော့ မတူဘူး။ ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ဘူး သိတာလေး ဖောက်သည်ချတာ။
သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဒီလိုတွေ့ရတော့ ၀မ်းသာပြီး အားတွေရှိလာသလို၊ why i don’t know?
ဦးသူရကြီး ပြန်လာနိုင်ရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲနော် ~~
ဒီလိုလှုပ်ရှားမှူသတင်းလေးတွေများများတင်ပေးပါ ။ ပုံလေးတွေပါတော့လည်း မြင်ရတာပေါ့ ။ တီဗွီမှာဒါမျိုးလာမှာမဟုတ်ဘူးလေ ။ TV ကလာတဲ့ သတင်းတွေက မကြည့်ချင်လည်းကြည့် ကြည့်ချင်လည်း ကြည့်နေရပြီး … တကယ်အပီအပြင် မလုပ်နိုင်ပဲ TV ထဲပါပါနေတဲ့လူတွေ တွေ့နေရတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေTVမှာပါတဲ့ ဘုရားထီးတင်ပွဲဆိုရင် ခါးကြားမှာ တစ်ခုခုထိုးထားပြီး ပုဝါအဖြူစီးထားတာ ကြည့်ရဆိုးတယ် ….ဘုရားရှိခုိးရင်း တစ်ခုခု ထဖြစ်တော့မဲ့အတိုင်းပဲ …
(လျှောက်မတွေးကြနဲ့နော် ဘုန်းကြီးကျောင်းသားခါးကြားမှာ လေးဂွထိုးပြီး တရားနာတဲ့ပုံTVမှာပါလာတာကို ပြောတာပါ အဟီး )
မိုက်တယ်ဗျာ ကျနော်ကြိုက်တဲ့သူတွေပဲဗျာ ကြက်သရေကိုရှိနေတာပဲ..
ဒါနဲ့ သတင်းတခုမှာ တစွန်း တစ ကြားလိုက်မိတယ်.. NLD က နိုင်ငံရေးပါတီပါတဲ့ ပရဟိတ လုပ်ငန်း လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး နိုင်ငံရေးဘဲ လုပ်မှာ လို့ ပြောတာ ကြားမိ လိုက်သလိုဘဲ.. အမှတ်တမဲ့ ကြားလိုက်တာ.. အစ မရှိ အဆုံး မရှိ ဖြစ်နေတော့.. ဟုတ်လား ဟင်.. သိကြလား
‘အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က နိုင်ငံရေးပါတီ ဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အနေနဲ့ ဆက်လက် ရပ်တည်သွားမှာပါ။ လူမှုရေးအဖွဲ့ လုပ်မယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မပြောခဲ့ပါ ဘူး။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်မယ်လို့သာ ပြောခဲ့တာပါ။ လူမှုရေးလုပ် ငန်းတွေ လုပ်မယ်ဆိုတာကလည်း ၁၉၉၅ ခုနှစ်ကတည်းက စပြောထားခဲ့ပါတယ်”ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
ဒါဆို ကြားမိတာ ဟုတ်တာပေါ့..